ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ ၂
စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ ၂
(ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက်) ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုများဖြစ်တဲ့ B1 , B2 , B3, B5 & B6 အနည်း ငယ်စီပါဝင်တဲ့အတွက် ခန္ခာကိုယ်မှာ တစ်ရှူး အသစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ သွေးနီဥများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အာရုံကြောများ အားကောင်းစေခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင်ပါ တယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်အနေနဲ့ ၂၈ မီလီဂရမ်ပါဝင်ပြီး ပိုတက်စီယမ်က ၁၁၅ မီလီဂရမ်ပါရှိပါတယ်။ ကယ်လစီယမ် နဲ့ ပိုတက်စီယမ် ၂ မျိုးဟာ ခန္ခာကိုယ်အတွင်းပိုလျှံနေတဲ့ ဆိုဒီယမ်ဆားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး သွေးကြော စနစ်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကူညီနိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ကယ်လစီယမ်ဟာ အရိုးပါးခြင်း၊ အရိုးပွခြင်း ရောဂါဖြစ်နှုန်းကို လည်း လျော့ကျစေပါတယ်.......... အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ၈။
နေရောင်ခြည်မှ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူအသုံးပြုမှု နည်းပညာ (Solar Electric Technology)
ဇီဝဒြပ်ထု(Biomass)မှ စွမ်းအင်(Energy)ကို ထုတ်ယူရာတွင် တွေ့ကြုံရသော စိန်ခေါ်မှုများ
စားသုံးဆီနှင့် အိုင်အိုဒင်း တန်ဖိုး
စွမ်းအင်နည်းပညာ ကဏ္ဍအတွက် ..... သတင်းကောင်းတစ်ခု(ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက်)
စွမ်းအင်နည်းပညာ ကဏ္ဍအတွက် ..... သတင်းကောင်းတစ်ခု
အိမ်ပျက် ဂျပိုး . . .
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ ၁ များကို ဖတ်ရန်။ Click here.
www.commerce.gov.mm	Visitors 3954847 Since June 2008